Apple inoshanda pane itsva 3D sensor yekamera yekumashure | IPhone nhau
Apple iri kugadzira tekinoroji ye 3D kudzika kuona yekamera yekumashure kuitira kuti iiswe mukati 2019 iPhones kugadzirwa, maererano neshumo nyowani kubva Bloomberg iyo yakanga ichangobva kubudiswa.
Iyo 3D sensor system ichave yakasiyana neiyo inowanikwa kumberi kamera yeiyo iPhone X uye inonzi ndiyo inotevera nhanho hombe mukugadzira iyo smartphone chishandiso chinotungamira kana zvasvika kune chaicho chakawedzerwa.
Apple iri kuongorora a tekinoroji dzakasiyana izvo parizvino inoshandiswa mu TrueDepth sensor system iyo inosanganisirwa mukamera yekumberi yeiyo iPhone X. Iyo iripo system inoenderana neyakarongedzwa mwenje matekinoroji ayo anoratidzira pateni yemakumi matatu ezviuru laser mapoinzi kumeso kwemushandisi uye zviyero zvinokanganisa kuburitsa iyo chaiyo 30,000D mufananidzo iyo inoshandiswa kusimbiswa kwemushandisi. Iyo sensor yakarongwa yekamera yekumashure yaizoshandisa "nguva-yekufamba-nhanho nzira" iyo inotora nguva inotora kuti laser ibhuye zvinhu zvakapoterera kuti igadzire matatu-mativi emamiriro enharaunda.
Iyo iripo TrueDepth kamera yaizoramba ichishandiswa kumberi kwePhones dzeramangwana, nepo iyo nyowani system yaizounza epamberi 3D yekuona kugona ine "nguva yekubhururuka" system kune yekumashure kamera, sekureva kwakabvunzwa. Hurukuro nevanogadzira dzave kutoenderera uye dzinosanganisira Infineon, Sony, STMicroelectronics uye Panasonic. Miedzo iyi inonzi ichiri mumatanho ekutanga uye inogona kupedzisira yashandiswa panhare.
Nokuburitswa kweIOS11, Apple yakaunza iyo ARKit software sisitimu inogonesa vanogadzira iPhone gadzira yakawedzera chokwadi chiitiko mune ako maficha. Kuwedzeredzwa kwekumashure kweiyo 3D sensor kunogona kunyepedzera kuwedzera kugona kwezvinhu zviripo kusangana nemagariro nekusimudzira kunyepedzera kwekusimba. Apple inonzi yakatambura nenyaya dzekugadzira painogadzira iyo sensor pane iyo iPhone X, sezvo zvinhu zvinoshandiswa mu sensor suite zvinofanirwa kunge zvakaunganidzwa neepamusoro chaiyo yekuita. Maererano Bloomberg, nepo iyo "nguva yekubhururuka" tekinoroji inoshandisa yakanyanya kumberi sensor sensor pane iripo kumberi kamera yeiyo iPhone X, hazvidi iwo mwero wakaenzana wekunyatso panguva yegungano. Izvi zvinogona kuita kuti kumashure-kutarisana neiyo 3D sensor ive nyore kuburitsa pazha vhoriyamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple inoshanda pane itsva 3D sensor yekamera yekumashure